Ahoana no atao mba tsy hikirakira ny votoatiny? & Ndash; Valiny amin'ny The Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan
Ahoana no atao mba tsy hikirakira ny votoatiny? - Valiny amin'ny The Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny dika mitovy na kopia votoaty dia manondro ireo votoatin'ny lahatsoratra ao anaty sy amin'ny sehatra mifanaraka tanteraka na mitovy tanteraka. Ny ohatra faran'izay mahazatra indrindra amin'ny votoatin'ny kopia tsy manimba dia:
Forum Forum izay mamorona fifanakalozan-dresaka tsy tapaka sy mipetaka ary mikendry smartphones sy fitaovana hafa mitovy amin'izany
Ny zavatra voatahiry aseho sy mifandray amin'ny URL miavaka
Ny dika printin'ny lahatsoratra sy ny votoatin'ny tranonkala
Manazava ny tetikady momba ny Content Semalt , Natalia Khachaturyan, fa raha misy pejy maromaro miaraka amin'ny votoatiny mitovy, ny sintomina dia ny hampiharan'ny Google ny tranonkalanao. Matetika ny spammers dia manoratra amin'ny votoatin-dresaka maro samihafa ary manipika ny milina fikarohana amin'ny tranonkala iray ary mahazo fandrindrana bebe kokoa amin'ny tranonkalany. Ny fanao mamitaka toy izany dia miteraka fahombiazan'ny mpampiasa. Rehefa hitan'ny mpitsidika famerimberina ao amin'ny aterineto ilay lahatsoratra, dia tsy liana amin'ny votoatiny izy - domain ilan. Google dia miezaka ny mikaroka ary mampiseho ireo pejy izay manana fampahalalana miavaka. Manasongadina tranonkala maro izy ary manakatona ireo tranonkala misy lahatsoratra mitovy na dika mitovy dika mitovy.
Ahoana ny fomba handaminana ny votoaty dika mitovy? ​​
Azonao atao ny mandray fepetra sasantsasany mba hamahana ny votoaty dika mitovy amin'ny aterineto, izay ahafahan'ny mpitsidika tia ny votoatinao noho ny fiandohany.
Fomba # 1: Ampiasao 301
Raha vao namerina namorona ny tranokalanao ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny
Tokony hitazona ny fifandraisana anatiny ianao ary ampiasao ny sehatra ambony indrindra mba hampivoarana ny rohy amin'ny tranonkalanao. Ireo sehatra ireo dia tokony hifanaraka amin'ny tranokalanao ary tokony ho firenena manokana.
Fomba №3: Syndicate amim-pitandremana
Raha toa ka nandidy ny votoatin'ny tranonkala hafa ianao, Google dia mety hampiseho ny dikan-teny izay mety indrindra ary mety amin'ny mpampiasa azy. Ity fomba fiasa ity dia miantoka fa ny tranonkalanao sy ny lahatsoratrao dia voarakitra ary manana rohy miverina amin'ny lahatsoratra na pejy voalohany. Noho izany, tokony ampifandraisinao tsara ny votoaty ary afaka mampiasa plugins maro mba hanaovana io asa io.
Fomba №4: Ampiasao ny konsole fisadianao ary ampifanarao ny safidinao
Azonao atao ny mampiasa ny fitadiavana finday ary milaza amin'ny rehetra ny fomba tianao hotsipihina na hodiavina. Raha tokony hampiasa lahatsoratra lava momba ny copyright ao amin'ny pejy farany ambany ianao, dia tokony hanoratra famintinana ianao ary hampifandray izany amin'ny pejy rehetra amin'ny alalan'ny WordPress plugin.
Fomba # 5: Ampidino ny votoatin'ny kapila
Tokony hampihenana ny famerenana ny boiler mba hiantohana ny fiarovana ny tranokalanao amin'ny aterineto. Ohatra, afaka manoratra famintinana ianao ary mampifandray izany amin'ny pejy miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Azonao atao ihany koa ny manandrana fitaovana handaminana parameter handraisana ny fanirianao Google, Bing, ary Yahoo hikarakarana ny tranokalanao sy ny mari-pamantarana URL anao.
Ny votoaty duplicate dia tsy mety amin'ny hetsika ao amin'ny tranonkala iray mandra-pahitan'ny Internet azy amin'ny Internet ary manipulate ny valin'ny fikarohana . Raha sendra olana amin'ny votoatin'ny kopia na duplicate ny tranonkalanao, ary tsy fantatrao izay tokony hatao, tsara kokoa ny manatona ireo mpitantana ny tranonkala hafa ary manaisotra ny votoaty. Azonao atao koa ny mandefa ny fangatahanao amin'ny Google, ary manala ny pejy mifanohitra amin'ny valiny ny motera fikarohana